lulu: အမဲအူပြုတ်၊ အမဲအူသုပ် လုပ်စားကြရအောင်
at 4:22 PM Labels: အရည်သောက်, အသုပ်
ဒီနေ့တော့ မောင်နှမတွေနဲ့အတူ အမဲအူပြုတ်၊ အမဲအူသုပ်လေး လုပ်စားကြမလားလို့လေ။
အမဲအူချိုဘေးနားမှာ ကပ်နေတဲ့ အဆီတွေအားလုံးကို လှီးပစ်လိုက်ရအောင်။ ပြီးရင် အမဲအူကို မန်ကျည်း သီးမှည့်အနှစ်နဲ့ ဆားနဲ့ နယ်ပြီးတော့ အချွဲတွေကုန်အောင် ဆေးပေးပါ။ ပြီးရင် အူအတွင်းပိုင်းကိုလည်း သန့်စင်သွားရအောင်လို့ အူကို လှန်ပြီးတော့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် မန်ကျည်းသီးမှည့်အနှစ်နဲ့ ဆားနဲ့ နယ်ပြီး ဆေးပေးပါ။ အညှီနံ့နဲ့ အချွဲတွေအားလုံး ကင်းစင်ပြီး ဖြူဖွေးသွားတာကို တွေ့ရမယ်နော်။
အမဲအူကို သန့်စင်နေတဲ့အချိန်မှာ မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားပေးပါ။ အမဲအူ သန့်စင်ပြီးတာနဲ့ ရေနွေးအိုးဆူချိန်နဲ့ ကွက်တိပဲ ဖြစ်မှာမို့ သန့်စင်ပြီးတဲ့ အမဲအူတွေ ကို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ထည့်ပြီး ၅ မိနစ်လောက် ပြုတ်ပြီး ပြုတ်ရည်တွေကို သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ အမဲထဲက အညှီနံ့တွေ ပျောက်ကင်းသွားစေပါတယ်နော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ရင် ပရက်ရှာကွက်ကာထဲကို အမဲအူကိုထည့်၊ ရေကို အမဲအူမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး မိနစ် ၃၀ ပြုတ်ပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ မီးပိတ်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက် ထားပေး၊ ပြီးတော့မှ အဖုံးဖွင့်ပြီး အထက်အောက်လှန်ပြီး ရေထပ်ထည့်ပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ လောက် ထပ်ပြုတ်ပေးပါ။
နံနံပင်ကို သန့်စင်တဲ့အခါ နံနံပင်အမြစ်ပိုင်းကိုလည်း ယူထားပြီး သေချာရေဆေးပြီး ထုထောင်းထားပါ။ နံနံပင်အရွက်လေးတွေကိုတော့ အပြုတ်ထဲထည့်သောက်တာတို့၊ အသုပ်ထဲ ထည့်တာတို့လုပ်ပေါ့လေ။
မုန်လာဥနီကို ကျွန်မက ကြိုက်လို့ အစိမ်းအတိုင်း ပါးပါးလေးလှီးပြီးအသုပ်ထဲလည်း ထည့်သုပ်တယ်၊ စွပ်ပြုတ်တွေထဲမှာလည်း အပေါ်ကနေ ကြက်သွန်စိမ်းထည့်စားသလိုပဲ ထည့်စားလေ့ရှိတာမို့ ထည့်တာပါ။ အနံ့မကြိုက်တဲ့သူတွေ မထည့်လည်း ရပါတယ်နော်။
အမဲအူပြုတ်အိုး ပွက်ပွက်ဆူပြီဆိုရင်တော့ မီးပိတ်၊ နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ လောက် အခိုးသေသွားအောင် ထား၊ ပြီးတော့မှ အဖုံးဖွင့်၊ ပြီးရင်အပေါ့အငန်မြည်းပြီးတော့ ထောင်းထားတဲ့ နံနံမြစ်လေးတွေ ထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်ပါ။
အမဲညှီနံ့လုံးဝကို မရဘူး၊ အပေါ်မှာ အမဲဆီလည်း ဝေ့မနေဘူး၊ အေးသွားရင်တောင် ခဲမသွားတဲ့ အနံ့တသင်းသင်းလေးနဲ့ သောက်ချင်စဖွယ်အပြည့်ရှိတဲ့ အမဲအူပြုတ် ရမှာပါ။ သောက်ခါနီးကျရင် တော့ အမဲအူပြုတ်ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရွယ်လောက်လေးရအောင် ညှပ်ထည့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်စိမ်း၊ နံနံပင်၊ မုန်လာဥနီတို့ထည့်၊ ငံပြာရည်လေး အနည်းငယ်နဲ့ သံပုရာ ရည်မွှေးမွှေးလေးညှစ်ပြီး သောက်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ အမဲ အူပြုတ် တစ်ပွဲရရှိမှာနော်။
အမဲအူသုပ်အတွက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ အမဲအူလေးတွေကို အရွယ်တော်လေးလှီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလှီးထည့်၊ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်အနည်းငယ်ထည့်၊ သံပုရာရည်လေး ညှစ်ထည့်၊ ကြက်သွန်ကြော်ဆီချက်လေး ထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပေးလိုက်ပါနော်။ ချိုချဉ်ငံစပ် အရသာ အပြည့်နဲ့ အမဲအူသုပ်တစ်ပွဲရပါပြီရှင်။
မောင်နှမတို့လည်း ကျွန်မနဲ့အတူ ၀ိုင်းပြီး အားပေးကြပါဦး။
မောင်နှမတို့လည်း ပိတ်ရက်မှာ တစ်ခါတလေ ဆီပြန်ဟင်းချက်မစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အမဲအူပြုတ် အမဲအူသုပ်လေး လုပ်စားကြည့်ကြပါလားနော်။
Shinlay October 19, 2011 at 4:59 PM
သွားရည်ကျအောင်လုပ်နေပြီမလုရေ :) ။ ဒီမှာ အမဲအူမရတော့ ရတဲ့ ပုဆိုးဂျမ်း လိုနဲ့ ပဲ လုပ်စားနေရတယ်။ စားချင်ပါတယ်။
လုလု February 10, 2012 at 11:06 AM
မမရှင်လေ့း့  ပုဆိုးဂျမ်းနဲ့လည်း စားကောင်းတယ်
စန္ဒကူး October 20, 2011 at 9:02 AM
လုလု February 10, 2012 at 11:07 AM
ကူးကူးလေးရေ့့  စားချင်သလောက်သာ စားနော့့့် 
မဒမ်ကိုး October 20, 2011 at 12:11 PM
အမဲသားမစာတော့ ၀က်အူနဲ့လုပ်ကြည့်မှထင်တယ် မလုရေ .
ပြင်ထားတာစားချင်စရာလေးမို့ လုပ်ကြည့်ချင်နေတား)
လုလု October 20, 2011 at 1:09 PM
မမရှင်လေးရေ့့့  အမဲအူမရလည်း ပုဆိုးကြမ်းနဲ့လည်း စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဆိုးကြမ်းလေး ၀ယ်လို့ရတာပဲ တော်သေးတယ်နော်။
ကူးကူးရေ့့့ စားပါဦး။
မဒမ်ကိုးရေ့့့  ၀က်အူနဲ့လုပ်စားလည်း စားကောင်းတယ်။ စားကြည့်ပါဦး။
rose of sharon October 22, 2011 at 1:55 PM
လုလု February 10, 2012 at 11:12 AM
ဟုတ် မနှင်းဆီ ၀ယ်ပြီး ချက်စားကြည့်ဦးနော်
Thuzar January 21, 2012 at 11:35 AM
Thanks for your generously share!
လုလု February 10, 2012 at 11:19 AM
ဟုတ်ကဲ့ မသူဇာ နောက်လည်း အလည်လာဖို့ ဖိတ်ပါတယ်နော်